Global Voices teny Malagasy » Fitetezam-bilaogy Kenyanina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Mey 2019 3:35 GMT 1	 · Mpanoratra Ory Okolloh Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Mediam-bahoaka
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka 30 mey 2005)
Efa nandrasana hatry ny ela.
- Scentiments miresaka zavatra izay matetika resahin'ny bilaogera kenyanina maro any am-pielezana – manina an'i Kenya .
-Ny mpanao politika Kenyanina nanome aingam-panahy tamin'ny fotoanan'ny ‘ahoana moa raha’.
Tsy izany  angamba no nokasain'ny mpanolotra ny AGOA (Africa Growth and Opportunity Act ) hojerena. Toy izany ihany koa amin'ny alalan'i Bankelele, manana fisafidianana vaovao amin'izao fotoana izao ny mpitia boky any Nairobi .
-Mitarika fanadihadiana siantifika momba ny “just friends”  (mpinamana fotsiny) i Mpisaina (Thinker).
-Manoratra sy mitaona i Wg-K ho an'izay tia mieritreritra hoe ny fanararaotana ara-nofo sy ny fampijaliana ankizy any Kenya dia niainga irery ihany avy any “Andrefana” sy ny ” Aterineto tsivalahara” mba hifoha amin'izay ary hifoka ny kafe . Afa-manome antoka anareo aho fa efa niaina toejavatra mitovitovy amin'izany na mahafantatra olona efa niaina izany toejavatra izany ny ankamaroan'ny Kenyanina vehivavy rehetra izay namaky ity lahatsoratra ity.
-Adrian miresaka fifaninanana oliravina any am-ponja manome vintam-piainana faharoa ho an'ny vehivavy .
-“Avelao ny gazety! ” [aza kitihina] hoy Afromusing.
-Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra, avy amin'ny iray tonga vao haingana indrindra ao amin'ny bilaogy, manana lahatsoratra mahafinaritra tamin'ny famakiana ny [bokin'i] Binyavinga Wainaina  ny ao amin'ny Diary of a Mad Kenyan Woman .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/15/138657/
 manina an'i Kenya: http://scentiments.blogspot.com/2005/05/missing-kenya.html
 Tsy izany: http://bankelele.blogspot.com/2005/05/bmw-agoa.html
 Africa Growth and Opportunity Act: http://www.agoa.gov/index.html
 “just friends”: http://thinkersroom.blogspot.com/2005/05/just-friends-scientific-study.html
 hifoha amin'izay ary hifoka ny kafe: http://betweenandbetwixt.blogspot.com/2005/05/home-grown-perverts.html
 manome vintam-piainana faharoa ho an'ny vehivavy: http://ajkenswi.blogspot.com/2005/05/from-prison-to-catwalk.html
 Avelao ny gazety!: http://afromusing.blogspot.com/2005/05/lay-off-press.html
 tamin'ny famakiana ny [bokin'i] Binyavinga Wainaina: http://madkenyanwoman.blogspot.com/2005/05/nature-of-talent-reading-binyavanga.html
 Diary of a Mad Kenyan Woman: http://madkenyanwoman.blogspot.com/